Suldaan Sabayso Oo U JAwaabay Madax-dhaqameedka Awdal | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Suldaan Sabayso Oo U JAwaabay Madax-dhaqameedka Awdal
Hargaysa (SDWO.com): Suldaan Mawliid Cali Ibraahim (Sabayso), oo ka mid ah madax-dhaqameedka woqooyiga Hargaysa ayaa si adag ugu jawaabay hadallo maalmahan danbe ka soo yeedhayay cuqaasha gobolka Awdal.
Kuwaasi oo sheegay in aanay ogolaanaynin in diiwaangelinta codbixiyeyaasha laga qabto lix goobood oo ku yaalla woqooyiga Hargaysa, tan iyo wixii ka danbeeyay markii ay xukuumadu ku dhawaaqday in diiwaangelinta laga qabanayo.
Waxaanu sheegay suldaan Sabayso in hadaladda xanafta leh eek a soo yeedhaya madax-dhaqameedka reer Awdal ee xaalad abuurka ah ay yihiin hadallo dadka sii kala fogaynaya, isla markaana colaad abuuri kara.
Suldaan Mawliid Cali Ibraahim (Sabayso), oo maanta shir jraa’id ku qabtay magaaladda Hargaysa waxa kale oo uu sheegay in uu xukuumadda ku hambalyay-nayo in ay dib uga qabato diiwaangelinta goobaha woqooyiga ee hore loogu muransanaa.
Waxaanu tilmaamay in haddii ay yihiin madax-dhaqameedka woqooyiga Hargaysa in ay xukuumadda ku garab taagan yihiin in si wanaagsan ay diiwaangelintu uga qabsoonto lixdaasi goobood.
Suldaan Sabayso, oo ka jawaabayay hadaladda ka soo yeedhayay salaadiinta reer Awdal, waxa uu yidhi “Waxaan doonayaa in aan ka hadlo qaylo dhaanta beryahan ka soo noq-noqonaysay gobolka Awdal. Waxaan leeyahay salaadiinta reer Awdal ee telefishanada ku wareeray, Somaliland waad ku faa’iideen ee rebashka yaraysta.
Xukuumadda-na waxaan leeyahay lixdii goobood ee gobolka Maroodijeex ka xayirnaa ee diiwaangelinta codbixiyayaasha laga qabanayo waanu idinku garab taaganahay, waanad ku mahadsan tihiin. lixdan goobood-na waa degaankayagii, waana nasiib daro in rag salaadiin sheeganayaa habeen walba yidhaahdaan dagaal ayaa ka dhacaya lixdaa goobood ee gobolka Maroodijeex ka xayir naa.
Sidoo kale suldaan Sabayso, ayaa ugu baaqay madax-dhaqameedka reer Awdal in ay iska joojiyaan hadaladda colaadda iyo kicintu ka muuqato ee ay maalin walba warbaahinta la hor taagan yihiin.
“Suldaan, waa looga wanaagsan yahay in uu colaad abaabulo, waa looga wanaagsan yahay in uu waxaas oo kale ku hadlo. Lixdaas goobood xalay ayaan tegay, kuwaasi oo kala ah Cabdi-geedi, Ceel-sheekh, Ceel la Helay, Damasha Hulka iyo Bidhaanley”ayuu yidhi suldaan Mawliid Sabayso.
Suldaan Sabayso waxa uu la hadlay beesha Ciise, waxaanu yidhi “Qolada Ciise waxaan leeyahay Saylac, idiinkumaanaan qabsan, xuduudeenana waad garanaysaan iyo halkii inoo xad ahayd. Markaa waxaan leeyahay Ciise niman kaa reer Awdal idinka ayaa kiciyaye halkoodii nagaga celiya. Ciise-na wax gaar ah ayaa naga dhaxeeyay, laakiin reer Awdal waa baroortu Orgiga ka weyn”.
Si kastaba ha ahaatee, maalmahan danbe ayaa madax-dhaqameedka gobolka Awdal waxaa ka soo yeedhayay hadallo cunfi ka muuqdo oo ay ku eedaynayeen xukuumadda in ay degaankoodii siisay beel kale, isla markaana ay dawladu doonayso in dhibaato ka dhacdo goobahaasi.
Lixdan goobood ee hore muranku uga taagnaa ayaa la filayaa in 3-da bisha October ee soo socota ay ka bilaabanto diiwaangelinta codbixiyeyaashu.